Puntland oo Xukunno Isugu Jira Dil iyo Xabsi Daa’in Ku Riday Rag Lala Xiriiriyey Alshabaab | Weheliye Online
Puntland oo Xukunno Isugu Jira Dil iyo Xabsi Daa’in Ku Riday Rag Lala Xiriiriyey Alshabaab
Maxkamadda darajada 1-aad ee ciidanka Maamulka Puntland ayaa maanta xukuno kala duwan waxa ay ku riday Rag lala xiriiriya in ay ka tirsan yihiin Dagaalamayaasha Al-Shabaab.
6 ruux ayaa la horkeenay Maxkamadda,kuwaas oo dhamaantood ahaayeen Ragg,fadhiga Maxkamada ayaa ka dhacday Garawe.
Maxkamadda ayaa sidoo kale Maxmed Ibraahim oo la sheegay inuu yahay 16 sano jir uuna la socday raga la xukumay ayaa waxaa ay maxkamaddu ku wareejisay wasaaradda cadaaladda iyo dhaqan celinta, maadaama uusan gaarin da’dii uu ku mudan lahaa xeerka ciqaabta maxkamadda.
Dhanka kale maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Puntland ayaa eedeysanayaasha kala ah Mustafe Aadan Keerow, Bashiir Macallin Nuur iyo Cabdifitaax Macallin Cali, waxaa ay ku riday min 20 sano oo xarig ciidan ah, waxaana lagu eedeeyey in ay ka soo qeyb qaateen dagaallada buuraleyda gobolka Bari.
Xeer ilaalinta ayaa raggaan ku soo eedeysay in tababarro ay ku soo qaateen Koonfurta Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in safarro dheer ay u soo galeen si ay u soo gaaraan buuraleyda gobolka Bari ee Galgala, kaas in badan ay ka dheceen dagaallo u dhaxeeyo ciidamada PSF Puntland iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-shabab.￼
Previous articleQARAMADA MODOOBAY OO WALAAC HOR LEH KA MUUJISAY CANSHURTA AY QAADAAN AL-SHABAAB.
Next articleTaariikhda Calanka Soomaaliyeed.